कंगना रनौटको ट्विटर अकाउन्ट बन्द - मधेश प्रदेश डटकम
January 22, 2021 | 166 पटक हेरीएकाे
एजेन्सी, ९ माघ । बलिउड कलाकार कंगना रनौट सामाजिक संजालमा निकै सक्रिय छिन् । आफ्ना हरेक भावना संजालमार्फत अभिव्यक्त गर्थिन् । बुधबार उनको ट्विट अकाउन्टमा केही समयको लागि प्रतिबन्ध लागेको छ । ट्विटरमा प्रतिबन्द लगाएपछि उनी भट्किएकी छन् ।
कंगनाले ट्विटमार्फत ट्विटरका सीईओ जैक डोर्सेमाथि आक्रोस पोखेकी छिन् । उनले लेखेकी छिन्, ‘लिबरल मानिसहरुले आफ्नो काका जैकसँग गएर रोएपछि मेरो अकाउन्टमाथि केही समयको लागि प्रतिबन्ध गरियो ।’
उनले आफुलाई धम्काईरहेको पनि बताएकी छिन् । उनले लेखेकी छिन्, ‘मेरो अकाउन्ट/भर्चुअल पहिचान कुनै पनि समयमा देशको लागि शहीद हुन सक्छ । तर मेरो रीलोडेड देशभक्त वर्जन फिल्मको माध्यमबाट फिर्ता हुनेछ । म तिमीलाई बाच्न दिनेछु ।’
कंगनाले हालैमात्र एक नयाँ फिल्मको घोषणा गरेकी छिन् । घोषणा भएको फिल्मको नाम ‘मर्णिकर्णिका रिटन्सः द लीजेड अफ दिद्दा’ हो । यसको साथै कंगनाले तेजस, धाकड, थलाइली जस्ता फिल्ममा पछिल्लो समयमा अभिनय गरेकी छिन् ।
दिनको दिन प्रेम प्रस्ताव आउँछः...
काठमाडौं, १३ माघ । मिस कोशी हुँदै चलचित्र क्षेत्रमा डेब्यु गरेकी सुस्मिता श्रेष्ठले चारवटा चलचित्रमा अभिनय गरिसेकेकी छिन् । उनले...
किन बन्द हुँदैछ ‘द कपिल...
मुम्बई,-बलिउड कमेडियन कपिल शर्माको कमेडी शो ‘द कपिल शर्मा शो’ले दर्शकलाई भरपुर मनोरञ्जन दिने गरेको छ । यो शोमा अतिथीका...
भीम रावललाई ‘मतिभ्रष्ट’ भन्दै ओलीको...
काठमाडौं, ८ माघ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी स्थायी समिति सदस्य भीम रावलको बुद्धि कोल्टे भएको टिप्पणी...
सडक संघर्षमा उत्रिएका नेताप्रति करिश्माको...
काठमाडौं, ८ माघ । नेपाली चलचित्रकी नायिका करिश्मा मानन्धरले सडक संघर्षमा आउने राजनीतिक दलहरुप्रति आक्रोश पोखेकी छिन् । उनले कोरोना...
एजेन्सी, ९ माघ । बलिउड कलाकार कंगना रनौट सामाजिक संजालमा निकै सक्रिय छिन् । आफ्ना हरेक भावना संजालमार्फत अभिव्यक्त गर्थिन्...
शाहरुख खानको फिल्म ‘पठान’ को...
एजेन्सी, ९ माघ । शाहरुख खानको फिल्म ‘पठान’ केही समयदेखि चर्चामा रहेको छ । फिल्मकोे सुर्टिङको क्रममा झडप भएको खबर...
प्रताप र समिक्षाको गीत ‘माया...
काठमाडौं, ९ माघ । अहिलेका चलेका गायक/गायिका प्रताप दास र समिक्षा अधिकारीको स्वर रहेको नयाँ गीत ‘माया कति सम्झिने’ बोलको...
विश्व कीर्तिमानी गीतकार डा. डीआर...
काठमाडौ, ४ माघ । विश्व कीर्तिमानी गीतकार डा. डीआर उपाध्यायको नयाँ गीत ‘यो मायाको डोरो’ सार्वजनिक भएको छ । गीतमा...